Oromo Free Speech: Yunivarsiitii Adaamaa Fi Anaaleen Godina Qellem Wallaggaa Hangii Tokko Maal Keessa Bulanii Oolan?
Jaallannee Gammadaa, Tuujubee Horaa
WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) — Wiixata Bitooteessa 14 bara 2016 galgala barattonni Oromoo kan Yunivarsitii Adaamaa Mootummaan Itiyoophiyaa nu hin bulchuu akkasumas dhiigii ijoollee Oromoo dhangala’e gumaa haa argatuu jechuun hiriiruu isaanii barattonni dubbatanii jiru. Yeroo kanattis polisiin addaa Oromiyaa kan mooraa yunivarsitichaa keessa duraanuu buufatee jira ittiin jedhan hiriira kana diiguuf aara himiimansuu fi dhukaasuu isaa ibsan. San booda baratonni gara lafa cisiicha isaaniitti erga baqatanii booda waraanni mootummaa Itiyoophiyaa doormii barattotaa cabsee seenuun barattoota gad baasuun jilbaan akka deemaniif dirqisisuu isaa fi sana booda gara Isataaadiyoomi mooraa sanaatti geessamanii garaan akka ciisan ta’uu isaanii barattoota keessaa ibsanii jiru.Halkan walakkaa ta’uuf daqiiqaan soddomni lafa hafeetti kan nu ciibsan qorra keessa bulle jedhan. Sana booda kutaan dhimmi nageenyaa kan mooraa yunivarsitii ganamaa qabee achuuma Istaadiyamii keessatti walgahii gaggeessuu isaa fi bulanii oolanii walakkeessa guyyaa irraa satadiyamii keessaa ba’uu dubbatu. Barattonni reebaman fi hidhaman akka jiraniis dubbatanii jiru. Prezidaantiin yunivarsitii Adaamaa Jang Lee dhimma kana kan ileen gabaasni akka isaan ga’ee fi garuu ibsa kennu akka hin dandeenye ibsan.
Posted by Oromo firee speech at 4:21 PM